Mpempe mmiri Igwe Water Strand Pelletizing
Nkọwa:mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ pelletizer, otu ihe eji achọ mma na-agba ahịrị, otu ịghasa pelletizing ahịrị, plastic pestizer mmiri mmiri Strus extrusion, okpukpu abụọ ịghasa ihe eji eme ihe na mmiri jụrụ oyi,
Home > Ngwaahịa > Pelletizer Extrusion > Pelletizer mmiri Strand Extrand
Ngwaahịa nke Pelletizer mmiri Strand Extrand , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ pelletizer , otu ihe eji achọ mma na-agba ahịrị suppliers / factory, wholesale high-quality products of otu ịghasa pelletizing ahịrị R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Water Strand Recycled plastic Flakes Pelletizing Line  Kpọtụrụ ugbu a
Reks Tigree plastic Flakes Pelletizing  Kpọtụrụ ugbu a
ABS Twin Screw Water String Granulation Line  Kpọtụrụ ugbu a
Noodle Pull Line Pelletizer maka PP PE PET  Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri mgbapụta mmiri Granulator maka akpọgharị akpọgharị  Kpọtụrụ ugbu a
Egburu Ntigba Ntugharị Elu plastic  Kpọtụrụ ugbu a
Line Strand Granulation Line maka plastic recycled  Kpọtụrụ ugbu a
LINA 135 Pulltizer Water Pipted Prustizer maka Mkpochapu ahihia ahihia LINA 135 Automatic Water Pull Line Granulator ọkachamara na nwughari ihe nkiri plastik mebiri emebi na otu plọg plastic na-emegharị mmegharị. N'ozuzu, A na-eji Pelletizer...
Reks Tigree plastic Flakes Pelletizing
L INA 120 Pull Line Extrusion Pelletizer maka Remegharịgharị Flakes plastic LINA 120 Mpempe mmiri Mpempe mmiri Automatic ọkachamara n'ịmegharị ihe nkiri sịnịma rọba na pulati ndị ahụ enwere ike ịmegharị rọba. N'ozuzu, A na-eji Pelletizer...
ABS Twin Screw Water String Granulation Line
L INA 110 Water Pull Line Extrusion Pelletizer maka ABS LINA ABS Resins Pelletizing Machines bụ ndị isi ụlọ ọrụ China roba na plastic granulation ụlọ ọrụ, ahụmịhe nke LINA na teknụzụ ndị mepere emepe na-enyere ụlọ ọrụ aka guzoro n'ihu ụlọ ọrụ...
Noodle Pull Line Pelletizer maka PP PE PET
L INA 90 Igwe Ọdụdọ Mmiri Strand Extruder Pelletizer LINA PP Pee PET Plọgrị na igwe pelletizing Machines bụ ndị butere ụzọ na ụlọ ọrụ roba na plastik, ahụmịhe nke LINA na teknụzụ ndị haziri ọhụrụ na-enyere ụlọ ọrụ aka inweta ọtụtụ ikike nke mba ahụ...
Mmiri mgbapụta mmiri Granulator maka akpọgharị akpọgharị
L INA 70 Priltizer Mmiri Strand Extrand LINA 70 akpaka Water Strand Extruder ọkachamara na nwughari na imebi nke PP, Pee, PS na PET plastic Bottles. LINA lara n'iyi plastic Single ịghasa Granulation Line bụ ndị isi na ụlọ ọrụ roba na plastik,...
Egburu Ntigba Ntugharị Elu plastic
L INA 65 Priltizer Mmiri Strand Extrand LINA 65 Line Autuic Water Strand Granulation Line siri ike na mgbughari ma nwekwaa ahiri ahiri ahihia na akwa bekee. Na mkpokọta, Renewable Plastic Noodle Extrusion Granulator ka ejiri mee ihe maka iche na...
Line Strand Granulation Line maka plastic recycled
L INA 45 Priltizer Mmiri Strand Extrand LINA Water Pull Line Pelletizing Production Line for Recycled machine machine, nwere igwe ọrụ otu, ụda olu na ọkụ dara ada na mkpọchi ọdịda ngwa ngwa yana ọrụ njikwa ndị ọzọ. Na mkpokọta, plastic Noodle...
China Pelletizer mmiri Strand Extrand Ngwa
A ga-egbutu ọtụtụ polymer ahụ wee mezie ya tupu emee ya ngwaahịa ikpeazụ. A ga-edozi ụzọ dị iche iche, roba LINA & plastic granulator nwere ike ekewa ụzọ anọ: 1. Mpepu ọkụ na usoro pelletizing ikuku. 2. Usoro mmịnye mmiri. 3. Usoro mkpocha mmiri. 4. Usoro granulation mmiri - mgbaaka. LINA pelletizer nwere ike igbo mkpa granulation nke viscosity dị elu na obere viscosity roba na ihe plastik, yana ụfọdụ ihe ọhụụ na mgbakwunye kemịkalụ.
Igwe eji igwe mmiri LINA enyela udiri igwe ihe eji eme ihe eji eme ihe. Dabere na ihe eji eme ya na usoro usoro eji eme ya, nhazi ya dịka ogologo ya na dayameta, usoro nke gbọmgbọm, ịghasa ihe ndozi, usoro mgbanwe ọkụ, ọnụọgụ na ọnọdụ nke iyuzucha, ụzọ nri, njikwa eletriki nwere ike kachasị. Igwe roba LINA na akwa mmiri plastik dị mma maka ụdị ihe eji emegharị emegharị, ihe mpụga, akwa iko, naịlọn, ABS, Masterbatch dị elu na ihe ndị ọzọ. Usoro akara pịntizer nke LINA na - eji teknụzụ ọhụụ ugbu a, nsonaazụ ya dị oke mma, usoro ya na-arụrụ onwe ya, ihe ndị na-esi na ya apụta dị mma.
mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ pelletizer otu ihe eji achọ mma na-agba ahịrị otu ịghasa pelletizing ahịrị plastic pestizer mmiri mmiri Strus extrusion okpukpu abụọ ịghasa ihe eji eme ihe na mmiri jụrụ oyi 75 Liters Nnukwu Ibe Igwe na-eme ka a dị jụụ Mmiri mgbanaka PP / PE / ABS Pelletizer